Ireo finday avo lenta 10 mahery indrindra tamin'ny septambra 2019, hoy ny AnTuTu | Androidsis
Ireo finday avo lenta 10 mahery indrindra tamin'ny septambra 2019, hoy ny AnTuTu
Ny iray amin'ireo tolotra malaza indrindra sy malaza ary atokisana amin'izao tontolo izao Android dia, tsy isalasalana, AnTuTu. Ary izany dia, miaraka amin'i GeekBench sy ny hafa, dia miseho amintsika hatrany ho mari-pahaizana azo itokisana izay raisinay ho toy ny teboka fanovozan-kevitra sy fanohanana, satria manome fampahalalana mifandraika aminay ny fahafantarana fa mahery, haingana sy mahomby ny finday dia, na inona izany na inona.
Toy ny mahazatra, matetika ny AnTuTu dia manao tatitra isam-bolana na, indrindra, ny lisitry ny terminal mahery indrindra eny an-tsena, isam-bolana. Noho izany, amin'ity fotoana vaovao ity dia asehonay anao ny volana septambra tsirairay avy, izay no farany navoakan'ny benchmark. Andao hojerena!
Ity lisitra ity dia naseho vao tsy ela akory izay ary, rehefa manasongadina izahay, dia an'ny septambra lasa teo, izay no antony ahafahan'ny AnTuTu hametraka an'io amin'ny laharana manaraka amin'ity volana ity, izay ho hitantsika amin'ny Novambra. Ireto ny telefaona finday matanjaka indrindra amin'izao fotoana izao, araka ny sehatra fitsapana:
Ireo telefaona matanjaka 10 mahery tamin'ny septambra 2019 avy amin'ny laharana AnTuTu
Satria azo tsipiriany amin'ny lisitra, na dia amin'ny sinoa aza, aryl Vivo Nex 3 5G ary ny iQOO Pro 5G izy ireo no voalohany, miaraka amin'ny isa 483,427 sy 481,211, ary tsy fitoviana isa lehibe dia lehibe eo amin'izy ireo.
Ny toerana fahatelo, fahefatra ary fahadimy dia alain'ny Asus ROG Finday 2, Xiaomi Black Shark 2 Pro ary ny Xiaomi Mi 9 Pro 5G miaraka amin'ny teboka 473,917, 464,953 ary 464,807, hanakatona ireo toerana dimy voalohany ao amin'ny lisitra AnTuTu.
Ireo finday avo lenta 10 mahery indrindra tamin'ny Aogositra 2019, hoy ny AnTuTu
Ary farany, ny tapany faharoa amin'ny latabatra dia voaforon'ny Meizu 16s Pro (460,076), Redmi K20 Pro (465,237), Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G (449,269), OnePlus 7 Pro (448,448) ary ny Huawei Mate 30 Pro (445,446), ao anaty filaharana mitovy ihany, hatrany amin'ny toerana fahenina ka hatramin'ny fahafolo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ireo finday avo lenta 10 mahery indrindra tamin'ny septambra 2019, hoy ny AnTuTu
Ny OnePlus 7T Pro dia ofisialy izao, lazainay aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ity modely vaovao ity
Ahoana ny fomba hamadihana ny efijery findainao Android ho iray faharoa ho an'ny PC na Mac anao